SomaliaReport: Dood B/badeedda Lagu Soo Gabagabeyeey Galmudug
Kalfadhi ay soo abaabushay hay’adda aan dawliga ahayn ee loo yaqaan nabadda iyo dimoqraadiyada Galmudug socdayna muddo laba maal;mood ah ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Dhuusomareeb. Kalfadhigan ayaa lagu eegayey xididka dhibka iyo saamaynta dhaqaale iyo midka ijtimaaci ee ay kooxaha Budhcad badeeddu u keeneen bulshada Somaaliyeed iyo dhaqaalaha caalamka kaleba. Kooxda shirka wadday ayaa sidoo kale isla soo qaaday hanaankii looga hor tagi lahaa B/badeednimada.
Dalad way oo ka kooban ururada bulshada rayidka ah, ururada hooyooyinka, saxaafadaha, ururada isku bahaystay xirfadaha, ururada dhalinyarada, oday-dhaqameedyada bulshada iyo wakiilo matalayey urur-diimeedka qunyar soocodka ah ee Ahlu Sunah Wal jamaaca ayaa qayb ka wada ahaa kalfadhigan, waxayna soo wada jeediyeen afkaartooda iyo sida ay wax u arkaan.
Wadahaalo iyo xog is waydaarsi ka dib, ka soo qayb galayaashu waxay isloa meel dhigeen:_
1-	In sababaha abuura B/badeednimada ay tahay shaqo la’aan, dawlad shaqaysa o ka hortagi karta b/badeednimada oo aan jirin. Maamulka jira o aan awood u lahayn inay ka hortagaan iyo inay saraakiisha qaarkood ku eedaysan yihiin iskaashi ay la leeyiohiin b/badeedda.
2-	Sida kaliya ee lagu cidhibtiri karo ama lagu yarayn karo b/badeedda waa in bulshada loo qabto dodo isla markaana saxaafadaha lagu soo bandhigo dhaqankooda guracan falalkoodo amni daro.
3-	Midda ugu muhimsan oo ah in la helo lana abuuro dawlad maamul dhisan oo kala danbeeya leh, taakulayn iyo garabna ka haysta beesha caalamka.
4-	Cusmaan C/laahi Nuur oo ahaa isku soo dubaridaha barnaamikan ayaa ugu danbayntii sheegay inay sii wadi doonaan kalfadhiyada noocan oo kale ah maadaama ay midho-dhal noqdeen isla markaana uu barnaamijkani yahay mid noociisa kii ugu horeeyey.